The Fifth Pillar - The Fifth Pillar
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ အလုပ်သမားဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ “အိမ်အကူအလုပ်သမားဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဆွေးနွေးပွဲသို့ TFP မှ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ်ဇင်မာမြင့်သည် အခြားသော အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
အိမ်အကူအလုပ်သမားများသည် အလုပ်သမားဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ပါဝင်နေပါသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိကျင့်သုံးနေသည့် အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများသည် အိမ်အကူအလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရလျှင် –
? အနည်းဆုံးအခကြေးငွေဥပဒေအရ အလုပ်သမားတိုင်း (တစ်ရက်အလုပ်ချိန် (၈) နာရီအတွက်) အနည်းဆုံး လုပ်ခ (၄၈၀၀) ကျပ်ကို ခံစားခွင့်ရှိသည်ဟုဖော်ပြထားသော်လည်း ထိုပြဋ္ဌာန်းချက်သည် “အလုပ်သမား (၁၀) ဦးအောက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိ” ဟု သတ်မှတ်ထားသည့်အတွက် အိမ်အကူအလုပ်သမားများသည် အနည်းဆုံးလုပ်ခလစာကို ခံစားခွင့်မရှိကြပါ။
? အိမ်အကူအလုပ်သမားများအတွက် တစ်ရက်အလုပ်ချိန်သည် (၈) နာရီဖြစ်သည်ဟူ၍ တိတိကျကျ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိသည့်အတွက် လက်ရှိတွင် တစ်ရက်အလုပ်ချိန် (၈) နာရီထက် ပိုပြီးလုပ်နေကြရသော်လည်း အခြား (အလုပ်သမားများကဲ့သို့) အချိန်ပို လုပ်ခလစာ (၂) ဆ ခံစားခွင့်မရှိသကဲ့သို့ (၈) နာရီထက်ပိုပြီး မလုပ်လိုပါဟု ငြင်းပယ်ခွင့် မရှိကြပါ။
? အိမ်အကူအလုပ်သမားများသည် ခွင့်ရက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက်ဥပဒေနှင့် အကျုံးမဝင်သည့် အလုက်အကိုင်အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် (အခြားအလုပ်သမားများကဲ့သို့) ရှောင်တခင်ခွင့်၊ ဆေးလက်မှတ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ မီးဖွားခွင့် များ ရပိုင်ခွင့်မရှိသည့်အပြင် ရက်သတ္တပတ်တွင် တစ်ရက်ကို အလုပ်နားခွင့်၊ အများပြည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက်များတွင် အနားယူခွင့် အစရှိတဲ့ မည်သည့်ခွင့်ရက် အမျိုးအစားကိုမှလည်း ခံစားခွင့် ရှိမနေကြပါ။
▪️ အထက်ဖော်ပြပါ အချက်များကြောင့် အိမ်အကူအလုပ်သမားများကို တစ်ရက်အလုပ်ချိန် “မနက်မိုးလင်းမှ မိုးချုပ်ထိ ခိုင်းစေပြီး၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအလုပ်ပိတ်ရက်၊ နားရက်၊ ခွင့်ရက်များမပေးပဲ အလုပ်ခိုင်းရင်လျှင်တောင်မှ လုပ်ခလစာကို ကြိုက်သလိုပေးလို့ရနေသည့်” သဘောသက်ရောက်မှုများ ရှိနေပါသည်။
?ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လတ်တလော ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အိမ်အကူအလုပ်သမားများအပေါ် အလွဲသုံးစားပြုမှု၊ ခေါင်းပုံဖြတ်မှု၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများအကြောင်းကို လေ့လာကြည့်မည်ဆိုပါက အိမ်အကူအလုပ်သမားသည် ဥပဒေအကာအကွယ်ကို အခြားအလုပ်သမားများထက် ပိုမိုလိုအပ်နေသည်ကို မီးမောင်းထိုး ဖော်ပြနေပြီပဲဖြစ်ပါသည်။
▪️ ထိုအခြေအနေများကို ပြန်လည်ကုစားနိုင်ရန် အိမ်အကူလုပ်သားများအတွက် အကာအကွယ်ပေးနိုင်မည့် ဥပဒေသစ် တစ်ရပ်ကို လွှတ်တော်မှ ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းရန် ကြိုပမ်းနေခြင်းသည် များစွာကောင်းမွန်သင့်လျော်ပြီး TFP မှလည်း များစွာ ကြိုဆိုပါသည်။
▪️TFP မှာပြုစုရေးသားထားသည့် “အိမ်အကူလုပ်သားများဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများကို ဆန်းစစ်လေ့လာသုံးသပ်ချက်” စာတမ်းကို ယခုလင့်ပ်မှ ရယူနိုင်ပါသည်။
← The Fifth Pillar နှင့် International Foundation for Electoral Systems
လူငယ်နှင့် ပြည်သူ့နီတိ →
Anti-human Trafficking Legal-aid program
April 30, 2020 July 3, 2020 admin 0
April 27, 2020 July 3, 2020 admin 0